Fangatahana amin'ny mpikarakara efitrano | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Mba hisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao dia mangataka amin'ny mpikarakara izahay mba hahatakatra sy hiara-miasa amin'ireto zavatra manaraka ireto rehefa mampiasa ilay fotodrafitrasa.
Ho fanampin'izany, rehefa mampiasa ilay fotodrafitrasa ianao dia miangavy anao hijery ireo torolàlana noforonin'ny vondrona indostrialy tsirairay avy ary angataho ny fahalalanao sy ny fiaraha-miasao amin'ny fisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao.
Fanitsiana / fihaonana mialoha
Ny mpikarakara dia hanana fihaonambe amin'ny fotodrafitrasa momba ny ezaka hisorohana ny fihanaky ny aretina amin'ny fotoana fangatahana hampiasaina amin'ny fotodrafitrasa na amin'ny fotoana anaovana fivoriana mialoha.
Amin'ny fanatanterahana ny hetsika dia handray fepetra izahay hisorohana ny fihanaky ny aretina mifanaraka amin'ny torolàlana ho an'ny indostria tsirairay ary handrindra ny fizarana andraikitra eo amin'ny mpikarakara sy ny toerana.
Azafady mba asio fandaharam-potoana malala-tanana amin'ny fanomanana, famerenana ary fanesorana.
Azafady mba apetraho amin'ny fotoana betsaka ny fotoana fialan-tsasatra sy ny fotoana fidirana / fivoahana.
Rehefa manao hetsika izay tsy iharan'ny fandrafetana ny "Drafitra Fanaraha-maso sy Fiarovana ny Infection" dia mamorona sy avoaka ny "Lisitry ny fanamarinana amin'ny fotoana anaovana ny hetsika" napetraky ny Foibem-panontaniana momba ny Tahirim-bolan'ny Fiaraha-miasan'ny Fiaraha-miombon'antoka Metropolitan Tokyo Metropolitan. Mba miangavy re!Raha mila fanontaniana dia antsoy ny TEL: 03-5388-0567.
Lisitra amin'ny fotoanan'ny hetsika (data Excel)
Momba ny fizarana seza ho an'ny mpijery (tahan'ny trano fampiantranoana)
Raha ny fitsipika ankapobeny dia tokony hotehirizina ho an'ny mpandray anjara ny seza hahafahan'ny mpikarakara mitantana sy manitsy ny toe-javatra mipetraka.
Miangavy mba handray fepetra feno hisorohana ny aretina, toy ny fanaovana sarontava, fanelezana ny fanakanana ny feo, ary ny fitandremana ataon'ny mpikarakara.
Ho an'ireo fampisehoana izay antenaina hanatrehan'ny be antitra sy olona manana aretina mitaiza, dia ahiana atahorana ny ho tratran'ny aretina raha sendra misy ny aretina, koa mba miangavy anao mba handraisana fepetra malina kokoa.
* Fandraisana an-tanana ny seza laharana eo aloha: Azafady mba jereo ny làlan'ny indostria ary alao ny elanelana ampy avy eo alohan'ny sehatra.Azafady mifandraisa amin'ny fotodrafitrasa azafady.
Fepetra fisorohana ny aretina amin'ny antoko mifandraika toy ny mpanakanto
Ny mpikarakara sy ny antoko mifandraika dia angatahina mba hiezaka mba hisorohana ny areti-mifindra araka izay azo atao, toy ny fanaovana elanelam-potoana ampy eo amin'ny samy mpanakanto arakaraka ny endrika maneho azy.Jereo ny torolàlana momba ny indostria raha mila fanazavana fanampiny.
Afa-tsy ireo mpanakanto, miangavy mba manaova sarontava ary aleo mamono otrikaretina tsara ao an-toerana ilay tananao.
Amin'ny toerana ahafahan'ny olona maro tsy voafaritra mikitika mora foana, toy ny efitrano fisoloana akanjo sy efitrano fiandrasana, mametraka vahaolana mamono otrikaretina ho an'ny mpanadio tanana sy hamindra otrikaretina matetika.
Raha ny momba ny fihinanana sy ny fisotroana ao amin'ny efitrano dia tsy maninona ny misakafo sns mandritra ny fotoana fohy aorian'ny fampiharana ny fihinanana mangina sy ny fiantohana ny rivotra (tsy afaka mihinana na misotro amin'ny sezan'ny efitrano).
Misafidiana olona iray mitantana fitaovana, fitaovana, fitaovana sns, ary ferana ny fizarana ataon'ny olona tsy voafaritra.
Ho fanampin'izay, azafady maka fepetra fisorohana aretina ampy amin'ny fampiharana / fampiharana, fanomanana / fanesorana, sns.
Raha miahiahy ianao fa misy areti-mifindra dia alefaso any amin'ilay toeram-pitsaboana avy hatrany ary atokàny any amin'ny tobin'ny vonjy taitra voatondro.
Ny fepetra fisorohana ny aretina amin'ny mpandray anjara
Iangaviana ireo mpandray anjara mba handrefesana ny maripana alohan’ny hahatongavana eny an-toerana, ary ampahafantaro tsara mialoha ny tranga izay hangatahana azy ireo tsy ho tonga eny an-toerana.Amin'izay fotoana izay, miangavy anao handray fepetra mba hahazoana antoka fa tsy hiharan'ny fatiantoka ny mpandray anjara ary hisorohana ny fidiran'ny olona misy soritr'aretina.
Tsy ny fandrefesan'ny tena ny mpandray anjara ihany, fa ny mpikarakara koa dia tokony handray fepetra toy ny fandrefesana ny maripana rehefa miditra amin'ny toerana.Ny mpikarakara dia asaina manamboatra fitaovana fandrefesana mari-pana (thermométer tsy mifandray, thermography, sns.).Raha sarotra ny manomana dia mifandraisa amin'ilay fotodrafitrasa.
Rehefa misy tazo mahery raha ampitahaina amin'ny hafanana mahazatraRaha misy soritr'aretina (*) na ireto manaraka ireto ianao, dia miangavy anao handray fepetra toy ny fiandrasana ao an-trano.
* Ohatra amin'ny fenitra "rehefa misy hafanana ambony noho ny hafanana mahazatra" ... Rehefa misy hafanana 37.5 ° C na ambony
Mba hisorohana ny famoriam-bahoaka rehefa miditra sy mivoaka, azafady mba tazomy ny elanelana ampy amin'ny fidirana sy fivoahana miaraka amina fotoana fohy, fiantohana ireo mpitantana, fizarana mpiasa sns.
Hakatona mandritra ny fotoana fohy ny buffet.
Azafady mba apetraho mialoha ny fotoana fivoahana ampy ary omeo torolàlana ny fivoahana amin'ny fotoana fohy ho an'ny faritra tsirairay amin'ilay toerana.
Azafady mba tsy hiandry na hitsidika aorian'ny fampisehoana.
Azafady azafady azafady ny anarana sy ny mombamomba ny fifandraisana maika amin'ny mpandray anjara amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rafitry ny tapakila.Ho fanampin'izay, azafady ampahafantaro mialoha ireo mpandray anjara fa ny fampahalalana toy izany dia azo omena amin'ny andrim-panjakana toy ny tobim-pahasalamam-bahoaka ilaina, toy ny olona voan'ny aretina mpahazo ny mpandray anjara.
Azafady mba ampiasao am-pahavitrihana ny fangatahana fanamafisana ny fifandraisana (COCOA) an'ny Ministeran'ny Fahasalamana, ny Asa ary ny Fiaraha-miasa.
Ho an'ireo mpandray anjara izay mila fiheverana, olona manana fahasembanana, beantitra, sns, azafady mba diniho mialoha ny fanoherana.
Miangavy anao ihany koa mba hisarika ny saina hisorohana ny fisorohana ny aretina alohan'ny sy aorian'ny fampisehoana, toy ny fampiasana ny fitaterana sy ny trano fisakafoanana tsy miankina.
Fepetra fisorohana manohitra ny fihanaky ny aretina
Ny mpikarakara dia tokony hifandray avy hatrany amin'ilay fotodrafitrasa raha misy olona ahiahiana ho voan'ny aretina ary mifanakalo hevitra momba ny valiny.
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny mpikarakara dia tokony hanara-maso ny anarana sy ny fampahalalana momba ny fifandraisana vonjimaika an'ny olona voakasiky ny hetsika sy ny mpandray anjara, ary hitazona ilay lisitra noforonina nandritra ny fotoana iray (iray volana eo ho eo).Ho fanampin'izay, azafady ampahafantaro ny olona voarohirohy tamin'ilay hetsika sy ireo mpandray anjara mialoha fa azo omena izany ireo andrim-panjakana toy ny tobim-pahasalamana raha ilaina izany.
Raha jerena ny fiarovana ny mombamomba anao manokana, dia miangavy anao haka fepetra ampy hitahirizana ny lisitra sns, ary ario araka ny tokony ho izy aorian'ny fandehan'ny fotoana.
Mitandrema azafady rehefa mikarakara ny mombamomba ny olona voan'ny aretina (ao anatin'izany ny mpiray monina, sns.) Izay nitranga, satria ho fampahalalana manokana momba izany.
Azafady mba apetraho ny mason-tsivana momba ny fanambarana ampahibemaso sy fampisehoana ampahibemaso rehefa sendra olona iray voa.
Fepetra fisorohana aretina ao amin'ny efitrano
Mifandraisa amin'ny fepetra fisorohana aretina
Ny mpikarakara dia tokony hametraka fanadiovan-tànana amin'ny toerana ilaina toy ny fidirana sy ny fivoahan'ny toerana ary zahao tsy tapaka izy io mba tsy hisian'ny tsy fahampiana.
Ny mpikarakara dia tokony mamono tsy tapaka ny toerana amin'ny toerana mora idiran'ny besinimaro.Azafady, amboary ny vahaolana famonoana otrikaretina ataon'ny mpikarakara.
Mba hisorohana ny aretin'ny fifandraisan-davitra dia mba diniho ny fanamorana ny tapakila amin'ny fotoana hidirana.
Azafady mba fadio araka izay azo atao ny taratasy kely, bokikely, taratasy fangatahana, sns.Ary raha tsy azo ihodivirana dia aza hadino ny manao fonon-tànana.
Azafady mba tsy hifandray amin'ny olona voarohirohy amin'ny fampisehoana sy ireo mpandray anjara, toy ny fitsidihana aorian'ny fampisehoana.
Azafady mba tsy aseho na ampidiro.
Azafady azafady ny faritra azon'ny mpandray anjara sy ny antoko mifandraika tafiditra (ferana ny hidiran'ny mpandray anjara amin'ny faritra misy ny akanjo, sns.).
Fepetra fisorohana ny aretina mitete
Toy ny fitsipika ankapobeny dia tokony hisaron-tava ireo mpandray anjara mandritra ny hetsika.
Miangavy anao mba handray fepetra hisorohana ny fitohanana mandritra ny fiatoana sy fidirana / fivoahana.
Raha misy mpandray anjara izay manao feo mafy dia tokony hifantoka manokana ny mpikarakara.
Fepetra fisorohana aretina eo amin'ireo antoko mifandraika (indrindra ireo mpanakanto) ⇔ mpandray anjara
Azafady mba tsy mitarika izay mampitombo ny mety fihanaky ny aretina (mangataka fihobiana, mampiakatra ny mpandray anjara amin'ny sehatra, manome dimy avo, sns.).
Mba omeo toerana ampy ary manaova saron-tava rehefa mitarika sy mitarika ny mpandray anjara.
Amin'ireo kaontera izay mifanerasera amin'ny mpandray anjara (fandraisana fanasana, mpanisa tapakila amin'ny andro mitovy), sns., Asio fizarana toy ny tabilao akrilika sy ambain vinina mangarahara mba hiarovana azy ireo amin'ireo mpandray anjara.
Ny fepetra fisorohana ny aretina amin'ny mpandray anjara ⇔ mpandray anjara
Tsy maintsy atao ny manao sarontava amin'ny seza misy ny mpanatrika, ary azafady, alao antoka fa hitafy azy tsara amin'ny fizarana sy fivarotana izany amin'ireo mpandray anjara tsy mitafy akanjo ary ny fifantohana tsirairay.
Azafady mba omeo fotoana ampy hanaovana fiatoana sy fotoana fidirana / fivoahana, raha jerena ny fahafaha-manao sy ny fahafahan'ny toerana, ny lalana fidirana / fivoahana, sns.
Azafady mba ampahafantaro azy ireo fa tokony tsy hifampiresaka izy ireo mandritra ny fiatoana ary rehefa miditra sy mivoaka, ary ampirisiho izy ireo hifady ny resaka mivantana ary hijanona amin'ny toerana lavitra eo amin'ny lobby.
Raha mpandray anjara marobe no antenaina, miangavy, ampiasao ny elanelam-potoana isaky ny karazana tapakila sy ny faritra rehefa mifindra avy eo amin'ny sezan'ny mpihaino mandritra ny fiatoana na rehefa miala mba hisorohana ny fijanonana.
Ao amin'ny trano fidiovana mandritra ny fiatoana, azafady amporisiho ny fandaharana amin'ny toerana ampy amin'ny fiheverana ny haben'ny lobby.
Azafady mba farano aloha ny sakafonao alohan'ny sy aorian'ny fidirana araka izay azo atao.
Noho ny fampiasana maharitra ny trano dia azo atao ny misakafo ao amin'ny efitrano, fa aoka ho fantatrao ireto teboka manaraka ireto.
Ataovy azo antoka ny rivotra.
Mipetraha amin'ny endrika tsy mifanatrika.
Omeo toerana malalaka eo amin'ny mpampiasa.
Fadio ny fizarana hazokely sy lovia eo amin'ireo mpampiasa.
Aza mifampiresaka mandritra ny sakafo.
Manaova sarontava raha azo atao.
Varotra entana sns.
Rehefa be olona io dia mba tereo ny fidirana sy ny fandaminana raha ilaina izany.
Mametraha famonoana otrikaretina rehefa mivarotra entana.
Ny mpiasa voarohirohy amin'ny fivarotana entana dia tokony hanao fonon-tànana raha ilaina ankoatra ny fanaovana sarontava.
Rehefa mivarotra entana, azafady aza tanterahina ny fampisehoana ny santionany vokatra na ny santionany vokatra izay hokasihin'ny olona maro.
Diniho ny fivarotana an-tserasera na amin'ny fandoavana vola tsy misy vola hampihenana ny fikirakirana vola araka izay tratra.
Fanadiovana / fanariam-pako
Hamarino tsara fa manao sarontava sy fonon-tànana ho an'ny mpiasa manadio sy manary fako.
Rehefa avy nahavita ny asa dia sasao ary diovy ny tananao.
Azafady tantano tsara ireo fako nangonina mba tsy hifandray mivantana aminy ireo mpandray anjara.
Ento miaraka aminao ireo fako namboarina. (Azo atao ao amin'ny fotodrafitrasa ny fanodinana vola.